Ciidamada Itoobiya ee ku sugan Gobolka Bay oo Maanta Weeraray deegaan ay Saldhig ku lahayd Xarakada Al-shabaab |
Ciidamada Itoobiya ee ku sugan Gobolka Bay oo Maanta Weeraray deegaan ay Saldhig ku lahayd Xarakada Al-shabaab
Arbaco, December 11, 2013 —Ciidamada Itoobiya ee ku sugan gobolka ayaa ayaa maanta weeraray deegaanka Korun-bood 00 25-km u jirta degmada Qansax-dheere ee gobolka Bay, halkaasoo ay saldhig weyn ku lahayd Al-shabaab.
Dagaal culus ayaa dhexmaray xoogagga Al-shabaab iyo ciidamadii Itoobiya ee weeraray deegaankaas, iyadoo la sheegay inay ku dhintene dagaalka 12-qof oo ka mid ah dhinacyadii dagaalamay.
Ciidamada Itoobiya ayaa la sheegayaa inay dhaafeen degmada Ceelberde ee gobolka Bakool iyagoo ku wajahan degmada Xudur oo horey uga baxeen; waxaa la sheegayaa in gobalka Bakool ay ka jiraan xiisad dagaal, ciidamada Itoobiya ayaa lagu wadaa inay ku biiraan howlgalka AMISOM.
Illaa hadda ma jiro hadal kasoo baxay Al-shabaab oo ku saabsan dagaalkii ay la galeen maanta ciidamada Itoobiya, iyadoo deegaanka lagu dagaalamay ay la wareegeen ciidamada Itoobiya.
Magaalada Baydhabo ayaa weli ka socda maamul u sameynta Koonfur-Galbeed ee Soomaaliya, iyadoo ay joogaan xildhibaanno kala afkaar ah laakiin waxaa la filayaa in shirweynaha ergooyinka ay ku mashquulsan yihiin soo gudbinta ergooyinka golaha wakiillada oo soo magacaabi lahaa madaxeynaha maamulka Koonfur-Galbeed ,
Dhinaca kale, waxaa socda shir kale oo uu wado xildhibaan Shariif Xasan Sh. Aadan oo ahaa afhayeenka baarlamaankii KMG ahaa isagoo wata in saddex gobol maamul goboleed loo sameeyo.